Mpamatsy marika KINGUP - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Mpamatsy marika KINGUP
Ahitsio: Denny　2020-03-26　Mobile
Manatsara ny haavon'ny vokatra sy ny fanandramana fomba, ary manakaiky ny fangatahan'ny tsena vaovao. Nahazo ny "China Top 30 Miorina amin'ny fananganana Indostrian'ny fananganana", "China Green Products" ary voninahitra hafa!
KINGUP dia mpamorona marika SPC matihanina any Chine.Toa taona maro izay dia nanolo-tena ny hanomezana mpanjifa ny vokatra an-trano maitso sy ny tontolo iainana, haitao ara-teknolojika ary traikefa an-trano an-trano.Manampy ny famokarana, dia mitondra fitantanana mirindra koa amin'ny famolavolana vokatra, marketing ary serivisy. miasa.
Nifanaraka tamin'ny tenin'ny "miorina tsara amin'ny kalitao isika, ny tsy fivadihana ho toy ny rohy fanalahidy, mpanjifa voalohany", mandroso ny filozofianan'ny raharaham-barotra "fitrandrahana sy fanavaozana, fanamafisana ary fandresena", ary ny fanomezana ny mpanjifantsika vokatra avo lenta, serivisy teknolojia matihanina ary fanoloran-tena. Ho tonga mpamokatra tsara indrindra amin'ny sehatry ny rihana SPC ao an-trano sy any ivelany.
Ny haavon'ny KINGUP dia mandray ny teknolojia mandroso avy any Eropa sy Belzika, ary mampiditra fitaovana fanafarana avy any Alemana.Tamin'ny teknolojia mahafinaritra, fitaovana famokarana mandroso ary ny foto-kevitra serivisy tsara dia mampiasa koa ny famolavolana tokana famokarana mba hahazoana antoka ny gorodona azo antoka, mitafy akanjo ary ho tia tontolo iainana. Nisy ny fitsipi-pitenenana mialoha. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra vita any amin'ny KINGUP dia aondrana any India, Philippines, Thailand, Korea Atsimo, Gresy, Etazonia, Canada ary tsena iraisam-pirenena hafa.
Manomboka amin'ny fiarovana kalitao sy ny tontolo iainana, ny gorodona KINGUP dia mifikitra hatrany amin'ny foto-kevitra momba ny fikarohana sy fampandrosoana momba ny tontolo iainana sy salama mba hampiroborobo ny indostrian'ny gorodona ho làlana mankamamy ny "kalitao ambony kokoa, ny maha-tontolo iainana sy ny fahasalamana", avy amin'ny fisafidianana materialy, fikarohana ary fampandrosoana, famokarana amin'ny famarotana sy ny serivisy. Ny fizotry ny fifehezana kalitao sy ny fikatsahana ny tombom-barotra lafo vidy dia miteraka laza tsara eo imason'ny mpanjifa.
Amin'ny lafiny ara-teknika, ny mpanamboatra KingUP dia manohy ny famoretana sy ny fanavaozana, izay nanatsara be loatra ny fananana vokatra ara-batana. Noho ny fiatrehana ny fitakian'ny tsenan'ny mpanjifa ny fahitana sy ny fampiononana ny gorodona, dia nahavita fitaovana fampiasa bebe kokoa izy ireo. Mandritra izany fotoana izany, manohy mamolavola sy mamolavola drafitra vaovao ho an'ny gorodona isika, hanatsarana ny teknolojia vokatra ary ny fanaraha-maso kalitao, hahafahana manatanteraka ny fanovana ny tsenan'ny mpanjifa fanatsarana ny tokantrano, fanatsarana ny sangan'asan'ny vokatra sy ny traikefa amin'ny fomba, ary manakaiky ny filan'ny tsena vaovao. Nahazo ny "China Top 30 Miorina amin'ny fananganana Indostrian'ny fananganana", "China Green Products" ary voninahitra hafa!
Mpamatsy marika KINGUP Ny atiny mifandraika